Soo dejisan Minecraft 1.12.1.1 – Android – Vessoft
Bogga rasmiga ah: Minecraft
Minecraft – cayaar caalami ah oo furan oo caan ka ah "sandbox" hiddaha, taas oo inta badan diiradda saareysa ciyaaryahanka, ee ma aha qisada. Dunida ciyaarta waxay ka kooban tahay alwaaxyo dhudhun ah, wax walba waxaa laga abuuray dhagxaan: xayawaan, geedo, jilayaal, aalado, iyo waxyaabaha gudaha ah. Minecraft wuxuu u soo bandhigayaa ciyaaryahanka si uu u sahamiyo adduunka aan dhamaadka lahayn ee adduunka ah, iyo inta lagu gudbayo ciyaarta, hel abaalmarinno dhiirrigelin leh oo ku saabsan dhammaystirka weydiimaha qaarkood. Fikradda ugu weyn ee Minecraft waa in la burburiyo baloogyada jira, ee macdanta kaas oo ciyaartoygu helayo cutubyo alaabo la mid ah, oo markaa loo adeegsado dhisidda qaabab kala duwan. Minecraft waxay leedahay nooc noocyo ciyaarta ah, oo midba midka kale uga duwan yahay gameplay-ga oo leh astaamo u gaar ah. Sidoo kale, ciyaarta waxaa lagu buuxin karaa isbedelo kala duwan oo laga helo soosaarayaasha kale, si ciyaartoydu ay u helaan khibrado iyo dareeno cusub ciyaarta ciyaarta la bedelay.
Naqshad aan caadi ahayn, naqshadeeye kubadeed
Adduun furan oo aan lahayn qorshe shirqool ah
Habab ciyaarta badan
Meelo badan oo ciyaarta ah oo leh jawi u gaar ah
Qaar badan oo ka mid ah xisbiyada saddexaad
Soo dejisan Minecraft
Faallo ku saabsan Minecraft
Minecraft Xirfadaha la xiriira